नेपालकी जलपरी गौरिकाले पाउने भइन ५९ लाख - NepalKhoj
नेपालकी जलपरी गौरिकाले पाउने भइन ५९ लाख
नेपालखोज २०७६ मंसिर २६ गते १५:००
२६ मंसिर, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कीर्तिमानी पदक जितेकी गौरिका सिंहले ५९ लाख रुपैयाँ पाउने भएकी छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्ण पदक पाउने खेलाडीले ९ लाख, रजतले ६ लाख र कांस्यले ३ लाख दिने घोषणा गरेका थिए । एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई ११ लाख तथा टिम इभेन्टमा स्वर्ण जित्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने उनले बताएका थिए ।
तर एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेहरुले कति पाउने भन्नेमा अधिकारीहरु नै अलमलमा देखिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले गौरिकाले ६५ र दुई स्वर्ण जित्ने मण्डेकाजी श्रेष्ठ, आयशा शाक्य र सुवास तामाङले २२÷२२ लाख रुपैयाँ पाउने बताएका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रस्ताव भने एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्नलाई ११ लाख रुपैयाँ दिने थियो ।
बिहीबार आज एक कार्यक्रममा राखेप सदस्य सचिप रमेश सिलवालले गौरिकाले ५९ लाख रुपैयाँ पाउने हिसाब सुनाए । चार स्वर्णको ११ लाखका दरले ४४ लाख पाउनेछिन् भने दुई रजततको ६ लाखका दरले १२ लाख । तीन कांस्य टिम इभेन्टमा जितेकाले जम्मा तीन लाख गरी कुल ५९ रुपैयाँ पाउने भएकी हुन् ।
धनको कमी हुन नदिन घरमा सधैं यस्ता सामान राख्नुस् !
यो कस्तो विकास ? ४२ प्रतिशत मानिसलाई पोषक आहार जुटाउनै सकिँदैन !
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै
कांग्रेस महाधिवेशन : भक्तपुर सभापतिमा थापा निर्वाचित
महाभारतका पाण्डवहरूबाट हामीले लिन सक्ने ज्ञान !